Antoine Griezmann oo ka hadlay waqtigiisii Barcelona iyo dareenka uu ku joogay – Gool FM
(Madrid) 22 Nof 2021. Weeraryahanka naadiga Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa qiray inuu aad uga walaacsanaa sawirka ay taageerayaasha naadigiisa ka qaadan doonaan kaddib ku biiristiisii naadiga Barcelona ee sanadkii 2019 kahor inta uusan xagaagan usoo laaban.
30-sano jirkan ayaa sheegay inuu haatan rajo wacan ka leeyahay inuu la guuleysto naadiga ka dhisan caasimadda Spain isagoo carrabka ku dhuftay inuu la joogo macallin aaminsan iyo taageerayaal wali ku kalsoon, hase ahaatee, waxa uu diiday inuu waqtigiisii Barca ku tilmaamo mid musiibo u ahaa xirfaddiisa.
“Aad ayaan ugu faraxsanaa inaan aado Barcelona, waxaan kusoo helay xiddigo cajiib ah oo aan koox-wadaag noqonay” ayuu Griezmann u sheegay Telefoot.
“Wax badan ayaan ka bartay macallimiintii aan la shaqeeyay, inkastoo aanan marmarka qaar ciyaari jirin weyna igu adkeyd, balse ma aysan ahayn musiibo waayo waxaan dhalinayay ku dhowaad 20 gool xilli ciyaareed walba, aniga ahaan, waxay ii ahayd sharaf weyn inaan usoo ciyaaray Barcelona” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Si kastaba ha ahaatee, weeraryahanka Faransiiska ah ayaa labo xilli ciyaareed oo aanan la ammaanin kusoo qaatay Camp Nou kahor inta uusan xagaagan qaab amaah ah ugu soo laaban garoonka Wanda Metropolitano iyadoo ay Atletico xiddigan heshiiskiisa joogto ka dhigi doonto dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Waa kuwee shanta musharrax ee ugu cad-cad ee qaban kara shaqada tababarka Man United kaddib ceyrintii Solskjaer?